#1 ဒီနှစ်မှာမျှော်မှန်းထားတဲ့ပန်းတိုင်တွေဘယ်လိုအောင်မြင်နိုင်မလဲ? | Mycanvas
ပြီးခဲ့တဲ့အပါတ်က ဒီနှစ်မှာထားရှိရမယ့်ရည်မှန်းချက်အကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း အရေးအကြီးဆုံးကိစ္စမှာ ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်အောင်အရေးတယူလုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့နဲ့မနက်ဖြန်မှာ ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အကြံပြုချက်များကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Tip 1 – တိကျသောရည်မှန်းချက်ကိုတည်ဆောက်ပါ
သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်ရန် တိကျတဲ့လုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုပုံမဖော်နိုင်ပါက သင်နောက်ထပ်ဘာတွေတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာ သင်မသိနိုင်ပါဘူး။ ဥပမာ သင်သင့်ရည်မှန်းချက်က ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့အတွက်ဆိုရင် သင်အလေးချိန်ဘယ်လောက်ကျရမယ်ဆိုတာမျိုးစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့အတွက် ဘယ်လို Diet Plan တွေလုပ်မယ်၊ ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုတာကို အစီအစဉ်ဆွဲသင့်ပါတယ်။
Tip2– အခွင့်အရေးတွေကိုလက်မလွှတ်ပါနဲ့
သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့လုပ်ဆောင်ရမှာတွေကိုစဉ်းစားပြီးပြီဆိုရင်တော့ ကြိုတင်ပြီးအချိန်ဇယားဆွဲထားဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာ – အလုပ်ပြီးတဲ့အချိန် တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ သောကြာနေ့တွေမှာ Gym သွားမယ်၊ Work out လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အချိန်ဇယားမျိုးတွေထားဖို့လိုပါတယ်။
Tip3– သင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တိုးတက်မှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုအစဉ်ကိုနားလည်ရန်အတွက်ပုံမှန်ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းဟာအရေးကြီးပါတယ်။ တိုးတက်မှုအပေါ်အခြေခံ၍ အချိန်ဇယားနဲ့လုပ်ဆောင်မှုကို ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်အောင်ညှိခြင်းကထိရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ ၂၀၂၁ အတွက်ရည်မှန်းချက်ကိုအောင်မြင်စွာရောက်ရှိနိုင်ဖို့ ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေက သင့်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်ပါသလဲ? သင့်မှာ စိတ်ကူးထားပြီးသားအစီအစဉ်ရှိရင်လည်းတခြား အသုံးပြုသူတွေကိုမျှဝေပေးပါဦး…